Hiran State - News: TfGda oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo ineysan diyaar u aheyn iney la shaqeyso maamul goboleedyada dalka ka jira.
TfGda oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo ineysan diyaar u aheyn iney la shaqeyso maamul goboleedyada dalka ka jira.
Talaado 22, Feb 2011 (HSOL)-War bixin dhaawaceysa dowlada federalka oo lagu sheegay musuq maasuqa oo heerkii ugu sareeyey gaaray iyo madaxda dowalda oon diyaar u aheyn iney la shaqeeyaan maamul goboleedyada ka jira dalka.
Dhawr maalmood ka hor ayey aheyd markii ay HS.COM ay ka qortay warbixin dheer dowalda federalka taasi oo ka hadleysay heerka uu joogo musuq maasuqa iyo in golaha wasiirada ee iminka jira ay yahiin kuwo mesha u jooga hanti abuurasho. nasiib wanag qoraalkaasi waxaa si weyn uga xanaaqay inta badan golaha wasiirada oo waxuu gaaray qoraalkaas madaxda wadanka hogaamineysa, kedibna waxgarad iyo aqoonyahano reer Hiiraan ah ayaa codsaday in laga saaro qoraalkaas oo ay u arkeen inuu dhaawacayo sharaftooda iyo ineysan aheyn kuwo wadanka dhaca.
Nasiib wanaag waxaa hada TFGda war bixin dheer ka qoray ICG oo ah wadamada siiya dhaqaalaha ku baxa dowlada federalka amaba ah group si weyn ula socda arimaha Somaliya warbixintiina waxey u qorneyd sidan.
Dowlada federalka wey ka musuq maasuq badan tahay dowladahii ka horeeyey tan iyo 2004 kii. musuq maasuqa ma ahan oo kaliya madaxweyne Shiikh Shariif oo kaliya in lagu eedeeyo ee waxaa ugu daran xukumada uu garwadeenka ka yahay R/wasaare Farmaajo iyo golahiisa wasiirada ee aqoonyahanada ahaa.
Dowlada federalka oo danaheeda ilaashaneysa waxey iska indho tirtay iney la shaqeyso amaba ay balaariso hanaanka dowladeed waxeyna dhegaha ka fureysatay maamul goboleedyada ka jira dalka kuwii hore iyo kuwii danbaba. waxaa kale oo ay warbixintu leetahay wey adag tahay in xitaa xukumadani la aamino ilaa Augost amaba bisha 8aad maadaama aysan wax badan soo siyaadin karin mudadaaas waxii ka horeeya.
Waxaa TFGda lagu eedeeyeye golaheeda wasiirada in marka CV kooda la arko ay yahiin kuwo tacliin sare leh oo waxa meesha ku qoran aad ayey u qurux badan yahiin laakinse shaqadooda amaba heerka ay howlahooda u gutaan ma ahan nidaam laga filan karo dad wax bartay oo waxey dhexda kaka jiraan musuq maasuq iyo wax is daba marsiin.
Arinta ugu yaabka badan wasiiradii aqoonyahanada ahaa ee shacabku is lahaayeen colaadii iyo dhibaatadii Somaliya wey ka maqnaayeen iyagaa dalka iyo dadka ka nixi doona ayaa maanta aduunyadii ay waxani ka qoreysaa. maxaa inoo haray Somaliyey bey tiri Asli oo ah gabar Somaliyeed oo aad u taageersaneyd dowlada Farmaajo oo ay u aragtay iney hogaaminayan wasiiro wax bartay.
War bixintaan ayaa laga yaabaa iney soo dedejiso in qaar wasiirada ka mid ah oo mustaqbalkooda danbe u naxayo iney iska casilaan xilalaka ay hayaan inta aan la gaarin waqtigooda.waxaa kale oo ICG la yaab ku noqotay qaar golaha wasiiradaan ka mid ah oo beesha caalamka weydiisanayo in waqtiga loo kordhiyo. R/wasaare Farmaajo iyo golahiisa wasiirada xitaa uma qalmaan iney waqtiga u haray dhameystaan maadama aysan soo siyaadineyn wax badan marka laga reebo musuq maasuq ayaa war bixinta lagu yiri.
Bal aanu aragno xukumada ka danbeyn doonta midaan waxa loogu yeeri doono iyaguna bal iney guryo qur qurxan oo ay qurbaha ku leeyahiin sidii ay deyntooda u nadiifin lahaayeen iney ku mashquulaan iyadoo shacabkii Somaliyeed gaajo iyo haraad u dhimanayaan. waxaa kale oo ay warbixinta sheegtay ineysan jirin ciidamo Somaliyeed oo awood leh waxa meesha lagu joogane ay tahay awooda 8000 ciidamo Amisom ah.dhaqaalahii ay aduunyada bixineysayba hadii la lunsanayo ciidanku ma cirkoow ka soo dhacayaa ayuu yiri A Abdi oo ah ardey wax ka barta UK.
Waxaa kale oo lagu dhaliilay xukumadani ayaa ah ineysan laheyn hanaan dowladeed maadama ay waxkasta ka horeyso musuq maasuq.hadaba ma laga yaabaa in berito marka ay mudadoodu dhamaato dhamaan xukumada Farmaajo iyo golahiisa wasiirada hantitooda la qarameeyo?Jawaabta shacabka Somaliyeed ee aan hada wax awood ah laheyn ayey dib ugu laabaneysaa.
· admin on February 22 2011 11:48:39 · 0 Comments · 1810 Reads ·
14,579,492 unique visits